RetroArch, ilay emulator malaza dia ho tonga any Steam amin'ny 30 Jolay | Ubunlog
Ny tsara dia tsara foana. Mety tsy izany velively no izy fa toa hita amin'ny lalao video. Raha tsy izany dia tsy azo hazavaina fa mahomby tokoa ireo emulator. Ilay voalohany nihaona tamiko taona maro lasa izay dia i MAME, ilay emulator ahafahantsika milalao arcade machine nanomboka tamin'ny 80 sy 90. Taty aoriana dia nihaona tamin'ny hafa aho izay nahafahako nilalao konsoly toa ny Mega Drive, ny Super Nintendo na ny Master System II. Taty aoriana dia nisy emulateur marobe toa azy RetroArch, emulator izay misy ny zavatra rehetra ilaintsika hahafahantsika milalao ny lohatenin'ny konsole maro samihafa.
Ny emulator dia nandany taona vitsivitsy vao nahazo laza. Navoaka voalohany tamin'ny 2010 izy io, fa tamin'izany fotoana izany dia maro amintsika no nisafidy hampiasa emulator misaraka satria efa fantatsika izy ireo ary satria manam-pahaizana kokoa izy ireo. Androany, RetroArch dia niverina tamin'ny vaovao indray, ary tsy noho izy namoaka fanavaozana lehibe, fa satria tamin'ny faran'ity volana ity ho hita eo amin'ny sehatry ny lalao video Steam. Toy ny kinova ho an'ny Linux, izay ho hitantsika amin'ny Steam dia ho afaka.
Steam's RetroArch dia hitovy amin'ny efa fantatsika
Izy io no ho fividianana fanahafana tsy lehibe indrindra nahatratra ny magazay Valve. I Libretro mihitsy no niandraikitra lazao ny vaovao ny zoma lasa teo nanazava ny lalana izay harahin'ilay fanombohana:
Ny kinova Windows no ho tonga voalohany (mahagaga izany…), raha ho avy kosa ny kinova ho an'ny Linux sy macOS.
Tamin'ny voalohany, tsy hisy fahasamihafana eo amin'ny kinova izay ho any Steam sy ilay azontsika atao ao amin'ny tranonkalany. Tsy hisy fampiasa Steamworks SDK na fiasa Steam fanampiny. Mikasa ny hanavao ny emulator izy ireo avy eo mba hanampy ny fampiasa Steam ho sehatra.
Ny famoahana voalohany dia manodidina ny 30 Jolay (ahem… ho an'ny Windows).
Ny teboka fahatelo dia manaitra, izay manazava izany tsy misy na inona na inona hanampy ao amin'ny Steam amin'ny kinova voalohany. Azo inoana fa tamin'ny voalohany dia tsy mifanaraka amin'ny Steam Link izany, izay ahafahantsika milalao amin'ny fitaovana tsy manohana, toy ny Apple iPad, iPhone na Apple TV. Na izany na tsy izany dia mbola mila miandry ny fandefasana azy ofisialy isika hahafantatra izay tsy azontsika atao ao amin'ny RetroArch of Steam amin'ny kinova voalohany.
Tsy toy ny Apple, Ny valve dia tsy manana lalàna mifehy ny fampiasana emulator eo amin'ny sehatra misy azy ireo, saingy kosa mandrara ny fifanakalozan-kevitr'izy ireo izy ireo ary manisy marika ny tenany ho "Pirate" ao amin'ny forum misy azy ireo. Ny orinasa dia tsy namoaka fanambarana mifandraika amin'ny fahatongavan'i RetroArch ho any amin'ny lampihazo, saingy afaka mieritreritra isika fa ho ofisialy amin'ity volana ity aorian'ny famoahana ny Libretro.
Raha izaho manokana dia heveriko fa RetroArch dia tsy dia mailaka noho ny emulator lalao video hafa natao ho an'ny konsol tokana ary mampiasa tsotra kokoa foana aho. Angamba ny fahatongavany amin'ny Steam dia hanova ahy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Ubuntu » Games » RetroArch, ilay emulator malaza dia ho tonga amin'ny Steam amin'ny 30 Jolay
Tonga ny Foliate 1.5.0 hanampy fanampiana an'i Amazon Kindle, ankoatry ny hafa
Fampiasana sy famokarana KDE, herinandro 79 - mbola miomana ny Color Night